Xanta suuqa kala iibsiga: Sancho, Havertz, Aubameyang, James, Thiago Silva, Hojbjerg. - Somgoal
Home Premier league Xanta suuqa kala iibsiga: Sancho, Havertz, Aubameyang, James, Thiago Silva, Hojbjerg.
Chelsea ayaa rumeysan in weeraryahanka Borussia Dortmund Jadon Sancho, oo 20 jir ah, inuu ku biiri doono Manchester United sidaas darteed waxay dareenkooda u weecisay Bayer Leverkusen iyo ciyaaryahanka qadka dhexe ee Jarmalka Kai Havertz.
Blues ayaa xiriir la sameysay kooxda ka ciyaarta Bundesliga ee dalka Jarmalka oo ku aadan saxiixa 20 jirka Havertz, halka garabka Brentford Said Benrahma uu isna ku jiro liiska Chelsea.
Aston Villa ayaa muddo dheer xiiseyneysay 24 jirka reer Algeria Benrahma waxayna isku dayi doonaan inay la soo wareegaan – hadii ay ka fogaadaan inay u laabato Premier League.
Daafaca dhexe ee reer Brazil Thiago Silva ayaa doonaya inuu sii joogo Yurub ka dib markii loo sheegay in qandaraaskiisa Paris St-Germain inaan la cusbooneysiin doonin, waxaana uu aaminsan yahay inuu ugu ciyaari karo koox ugu yaraan labo xilli ciyaareed oo kale.
Shan naadi oo Ingariis ah – Arsenal, Everton, Newcastle, West Ham iyo Wolves – ayaa isha ku haya saxiixa 35 jirka kabtanka PSG.
Arsenal ayaa ku rajo weyn xiriirka ay la leeyihiin weeraryahan Pierre-Emerick Aubameyang aabihiis – oo sidoo kale ah wakiilka 30 jirka – ayaa ka caawin doonta inay heshiis cusub la galaan kabtanka kooxda Gunners.
Leicester City ayaa soo xerogelisay daafaca dambeedka bidix ee Ajax iyo xulka Argentina Nicolas Tagliafico, oo 27 jir ah, si uu ugu noqdo badalka suurtogalka ah ee xulka England Ben Chilwell, kaasoo lala xiriirinayo Chelsea iyo Manchester City. (Qoraa)
Manchester United ayaan dooneyn inay u ogolaato xiddiga garabka ka ciyaara ee reer Wales Daniel James, oo 22 jir ah, inuu amaah kaga tago kooxda – xitaa haddii ay la soo wareegaan xiddiga heerka caalami ee dalka England Sancho. (Manchester Evening News)
RB Leipzig ayaa doorbidi lahaa inuu iska iibiyo daafaca 21 jirka ah ee reer France Dayot Upamecano, kaasoo lala xiriiriyay Arsenal, inuu ka lumiyo heshiis xor ah marka uu qandaraaskiisu dhacayo June 2021.
Xiddiga qadka dhexe ee Paris St-Germain Idrissa Gueye ayaa sheegay inuusan dooneynin inuu baxo, inkastoo kooxda heysata horyaalka Faransiiska ay u muuqatay inuu u furan yahay 30 jirka reer Senegal. Waxaa lala xiriiriyay inuu ku laabanayo Premier League, iyadoo Wolves iyo kooxdiisii ​​hore ee Everton ay xiiseynayaan.
Southampton ayay u badan tahay inaysan aqbalin wax ka yar £ 35 milyan ginni kabtanka Pierre-Emile Hojbjerg. 24 jirka khadka dhexe ee reer Denmark ayaa bartilmaameed u ah kooxaha Everton iyo Tottenham.
Kooxda Isbaanishka ee Barcelona ayaa heysata ilaa 7da Luulyo inay la kulanto 110 milyan euro (£ 98m) oo ah lacagta lagu burburin karo qandaraaska weeraryahanka kooxda Inter Milan iyo xulka Argentina Lautaro Martinez ka hor inta uusan dhicin.
Previous articleRaheem Sterling, Jadon Sancho, Trent Alexander-Arnold & Marcus Rashford oo lagu soo daray liistada kuwa ugu qiimaha badan.
Next articleMessi oo ka mid ah gooldhaliyaasha xilli Barcelona ay guul la soo laabatay.
Jose Mourinho: “Ma ahayn daneyste goortii Inter Milan ku guuleysatay champions...